My tiny world: प्रेम र वाइन एकै हुन्
प्रेम र वाइन एकै हुन्
'वाइन र केटीमा कुन वढी नसालु' मैले सोधे । केटीहरुलेवाइन भने केटाहरुले केटी । मत वाझियो । 'मलाई तलाग्छ दुवै उस्तै हुन्' नित्यानले भने । कसरी ? 'वाइनमाअल्कोहल हुन्छ त्यसै नसालु हुने भयो । केटीहरु सेक्सीहुन्छन् त्यो पनि नसा नै हो', उनले गर्ल्फ्रेन्डले कुट्ने हुन्कीभन्ठानेर होला दुवै हात समातेर भने । 'हाउ फन्नी एन्सर' उनकी गर्ल्फ्रेन्डले भनिन् ।
साँझको समय । झरीले निथु्रुक्क भिजेको छ, काठमाडौं । मधुरो उज्यालोमा सिगारको धुवाँ मडारिँदै छ । मन्द मुस्कानसागै वेटरहरू अर्डर लिन व्यस्त छन् । यो रंगिन साँझमा अंगालोमा बाँधिएर वाइनको चुस्की लिने थुप्रै छन् । लाग्छ, माहौल नै मत्तिएको छ ।
न्युरोडको 'रिभल्विङ रेष्टुराँ' पुग्दा हामीलाई यस्तो लाग्यो त्यहाँको माहोल पूरै मादक छ । बारको देब्रे कुनामा दुई प्रेम जोडी वाइनको नसामा गफिरहेका छन् ।
'हामी नि जोइन हुन सक्छौं ?,' आफ्नो परिचय दिँदै गफिने अनुमति माग्दा उनीहरू एकपल हिच्किचाएनन् ।
'भइहाल्छ नि ।'
'वेदरले साथ दिएको छ आज,' रेड वाइनको चुस्की लगाउँदै सुसान्तले भने, 'आज त लिमिट क्रस गरिन्छजस्तो छ ।' सायद उनको इसारा बाहिर झमझम दर्किरहेको झरीतिर थियो ।
अंगालोलाई केही खुकुलो पार्दै सुसान्तकी गर्ल्फ्रेन्ड सुमिकाले भनिन्, 'ब्वाइजहरूलाई डि्र्ङ्क्स गर्न बाहनामात्र चाहिन्छ ।'
उनको ठिकअगाडि बसेका छन् नित्यान र उनकी गर्ल्फ्रेन्ड रुजिना । कानमा एयरफोनको टुसो ठुसेर मोबाइलमा गीत सुनिरहेकी रुजिना अगाडिको प्लेटबाट चिप्सचिल्ली टिप्छिन् । 'वाइनसँग स्लो मोसनका गीत सुन्न रमाइलो हुन्छ है ?'
'त्यसमाथि यो मौसममा,' म थप्छु ।
'ठिक भन्नुभो, नित्यान मतिर हात बढाउँछन्, 'गिभ भि फाइभ ।' हामी हात पड्काउछौं ।
टेबलमा हिल सिराज क्याबर्नेट ब्रान्डको रेड वाइन आधा रित्तिसकेको छ । वाइनको खाली बोतलसँगै उनीहरूको मन मात्तिदैं गएको प्रष्टै देखिन्छ । भर्खरै पढेर सिध्याएको पाउलो कोहेलोको 'इलेभेन मिनेट्स' को रोमान्टिक प्रसंग विस्तारै प्रेम प्रसंगतिर मोडिन्छ ।
'वाइन खाएर 'पास्ट लभ' को कुरा गर्न मज्जा आउँछ,' नित्यानले भने, 'लभ र वाइन । कस्तो कम्बिनेसन मिल्ने !'
एक वर्षअघिको प्रेम प्रसंग सम्झँदै उनले भने, 'फिलिङ्स नै नभए पनि रहरले उनी (नाम भन्न चाहेनन्) सँग हिँडियो तीन महिना पागल प्रेमी बनेर । त्यो बेला पनि हामी ठमेलको एक रेष्टुराँमा बसेर खुब वाइन पिउँथ्यौं । वाइन र कफी नभइदिएको भए लभको मजा पनि आउँदैन थियो ।'
त्यही भएर होला, नेपालमा मदिरा पारखी ह्वात्तै बढ्न थालेको । तथ्यांकले पनि यही देखाउँछ ।
आर्टिकल पुरा नभएपछि नित्यानलाई थप इन्टरभ्युका लागि अरु साथीहरुसँगै आउन आग्रह गर्दै शेर्पा मलमा वोलाए । 'कहिलेदेखि वाइन पिउन थाल्नु भएको ?' उनले भने, 'थाहा छैन तर दुई बर्ष भयो होला ।' वाइन नै चै किन पिउनु हुन्छ ? प्रश्नको शिलशिला शुरु भयो । कस्तो समयमा पिउनु हुन्छ ? पिउदा कस्तो महशुस हुन्छ ? वाइन पिएर घर जादाको प्रतिकृया के हुन्छ परिवारबाट ?
'पत्रकारलाई कोइसन चै कति आउने', एक्लै आएका नित्यानले भने, 'अरु डि्रङ्सभन्दा पिउन सजिलो हुन्छ । र निल्दा पनि गाह्रो हुदैन ।' छोटो समयमै कफिका लागि प्रसिद्धि कमाएको शेर्पा मल अगाडिको कौशीमा अहिले हामी कफिको स्वादमा वाइनको गफ गर्दै छौं ।
साँझतिर वाइन पिउन रमाइलो हुने वताउदै उनले वाइन खाएर घर जाँदा कसैले केही नभन्ने वताए । 'वाइनलाई सिम्पल डि्रङसका रुपमा हेरिन्छ हाम्रोमा', वाफ छुटिरहेको कफि सुरुप्प पार्दै उनले भने, 'सायद नेवार भएर पनि होला ।' अहिलेको जेनेरेसनले वाइनलाई अन्य डि्रङ्सभन्दा मनपराए पनि आदत वसिनसकेको उनको वुझाइ छ । 'ग्यादरिङमा पहिलो रोजाइ वाइन हुन्छ', उनले भने, 'दिनभरी एक एक वटा टेन्सनमा होइन्छ साँझ गर्ल्फ्रेन्ड भेट्दा फन गर्न मनलाग्छ त्यो भएर वाइन पिउने हो ।
उनका अनुसार, आफ्नो जेनेरेसनको सवैले वाइन पिउने गरेका छन् । वाइन भलाद्मीहरुको लागि वनाइएको सफ्ट डि्रङ्स भएकाले 'युथ' हरुले मनपराउने गरेका हुन् । उनले आफ्नो जेनेरेसनको प्रायले वाइन पिउन थालेकाले आफूले पनि वाइन शुरु गरेको वताए । मतलव देखासिखी ? 'त्यस्तो पनि होइन तर इन्करेजमेन्ट', उनले भने । वाइनले स्मार्ट महशुस गराउने उनले वताए ।
वाइन पिएपछि के गर्न मन लाग्छ ? मेरो अर्को प्रश्नमा नित्यानले भने, 'हास्न मनलागछ । फन गर्छु । नेपाली वोल्दीन । गर्लफ्रेण्डसँग फ्ल्र्टिङ गर्न मन लाग्छ ।' आधा घण्टाको गफपछि शेर्पामलबाट विदा हुदै गर्दा उनले आफ्नी गर्ल्फ्रेन्ड को नम्वर दिए वाइन वार्ताका लागि ।
नित्यानले मैले फोन गर्ने वताइसकेकाले रुजिनाले खुलेरै कुरा गर्न थालिन् । उनले केटाहरु जति केटीहरु वाइन नपिउने भएपनि विस्तारै केटीहरु पनि वढ्न थालेको वताइन् । भनिन्, 'संगतको कुरा हो, साथीहरु सवै खाने भएपछि म खान्न भन्न सकिन्न अनि त खानेको सख्या वढिहाल्छ नि ।' मतलव देखासिखीबाट वाइन खाने केटीहरु वढेको हो ? 'हैन देखासिखी भन्दा पनि मोडर्ननाइजले यस्तो भएको हो' उनले भनिन्, 'सवैले खाइरहेको हुन्छ कति ठाउमा वाध्यताले पनि खानु पर्ने हुन्छ ।' उनलाई वोइफेन्डसँग वसेर वाइन खादा मजा लाग्ने रहेछ । भनिन्, 'उ (नित्यान) मात्रै हुदा इजि फिल गर्छु तर अरु केटा साथीहरुसँग मलाई इजी लाग्दैन ।' रुजिनालाई ग्रुपमा घुलमिल हुन वाइनले सहयोग गर्छ भन्ने लाग्दो रहेछ । अलिअलि पिएपछि मनको कुरा खुल्ने अनि सवैसग नजिकको महशुस हुने उनले वताइन् ।
अब लागौ न्युरोडस्थित 'रिभल्विङ रेष्टुरेन्ट' तिर नै । सुसान्तलाई पर्मानेन्ट प्रेमिका चाहिएको रहेछ जुन अहिले सुमिकालाई भेटेपछि पुरा भएको छ । 'उनलाई पाउनु अघि धेरैसँग लभ गरियो', उनले भने, 'तर, के के नमिलेर कसैलाई लाइफ पार्टनर वनाउन सकिएन ।' लभ भनेको वाइनजस्तै त हो । कसरी ? वाइनले स्वादका कारण पारखी वढाउँछ, लभले फिलिङ्सका कारण ।
वाइनको इतिहास नेपालमा त्यति पुरानो छैन । तर लभको कसैलाई थाहा छैन । 'लभ र वाइनको अर्को फिचर पनि मिल्छ', नित्यानले भने । स्वभाविक रुपमा प्रश्न जन्मियो, के ? 'वाइन जति पियो त्यसको मात त्यति नै गाढा हुन्छ' नित्यानले भने, 'लभ पनि जति पुरानो भयो त्यसको असर त्यति नै गाढा हुन्छ ।'
तीन बर्षदेखि वाइन खान थालेका उनीहरुको दैनिकी भने वाइन होइन । 'महिनामा ७ पल्टसम्म खान्छौ', कम वोल्ने सुसान्तले वाइनको मातसँगै मुख खोले, 'कति खाइयो खाइयो तर व्रान्ड कुनैको याद छैन ।' वाइनको स्वाद एकै हुने भएकाले व्रान्ड याद नभएको उनले बताए । 'फेरी नाम पनि अप्ठ्यारा हुन्छन् वाइनको' सुसान्तले थपे, 'रेड र ह्वाइट थाहा छ वस् ।' मदिरा व्यवशायी श्रेष्ठका अनुसार, पछल्लो समयमा वाइनको माग विपत्तासँग वढेको छ । उनले नेपालमा वाइन कति खपत हुन्छ भन्ने तथ्यांक कसैसँग नभएपनि नक्कल गर्ने वानीका कारण पछिल्लो केही बर्षदेखि वाइनको माग अत्याधिक वढ्न थालेको वताए ।
'वाइनले सेक्स अपिल गर्दो रहेछ' एकाएक प्रशंग वदल्दै रुजिनाले भनिन्, 'वाइनले ओठ पातलो र गाला रातो वनाउँछ ।' उनको कुरामा सुसान्तले सहमति कसरी नजनउन् । उनले भने, 'एक्ज्याक्ट्ली, वाइनमा केटीहरु सेक्सी देखिन्छन् नि ।' प्रतिउत्तरमा रुजिनाले भनिन्, 'केटाहरु प्नि ।'
'वाइनले सेक्सुअल डिजायर वढाउछ भन्छन् नि ?' मेरो प्रश्न खस्न नपाउदै सुमिकाले भनिन्, 'केटाहरुको होला केटीको त होइन ।' उनको हत्तपत्त आएको जवाफले हामी माझ हाँसो फैलियो । हाँसो थामिएपछि नित्यानले भने, 'यसको मतलव केटीहरुलाई डिजायर नै हुदैन है ?' फेरी हाँसो थामिदैन । 'मैले त्यसो भनेको होइन' उनले भनिन्, 'आइ मिन, वाइन खाएको वेला हुदैन, जस्ट लभ फिलिङ्स मात्र वढी हुन्छ ।'
केटाहरु वाइन थोरै खाएपनि मातेको नक्कल गर्ने कुरामा दुवै केटीहरु सहमत भए । केटाहरुले प्रतिवाद गरेनन् तर उनीहरुले भने, 'केटीहरु लागे पनि नलागेको नाटक गर्छन् ।' कुरा वरावर ।
'वाइन र केटीमा कुन वढी नसालु' मैले सोधे । केटीहरुले वाइन भने केटाहरुले केटी । मत वाझियो । 'मलाई त लाग्छ दुवै उस्तै हुन्' नित्यानले भने । कसरी ? 'वाइनमा अल्कोहल हुन्छ त्यसै नसालु हुने भयो । केटीहरु सेक्सी हुन्छन् त्यो पनि नसा नै हो', उनले गर्ल्फ्रेन्डले कुट्ने हुन्की भन्ठानेर होला दुवै हात समातेर भने । 'हाउ फन्नी एन्सर' उनकी गर्ल्फ्रेन्डले भनिन् ।
रातको नौ वजिसकेको थियो । पानी पनि थामिएकाले रेष्टुरेन्ट विस्तारै पातलिन थाल्यो । फेरी कुनै दिन केटी र वाइनको विषयमा कुरा गर्ने अघोषित वाचा गर्दै हामी वतियौ आआफ्नो वाटो ।
स्रोत : नागरिकन्यूज डटकम
Posted by mytinyworld.blogspot.com at 3:52 AM